कपडा खोलेर विद्यार्थीको अगाडि डान्स गर्थिन् शिक्षिका, देखाउँथिन् अश्लील भिडियो | Rajmarga
कपडा खोलेर विद्यार्थीको अगाडि डान्स गर्थिन् शिक्षिका, देखाउँथिन् अश्लील भिडियो
शिक्षकले विद्यार्थीलाई सदाचारको पाठ पढाउने अपेक्षा गरिन्छ । मातापितापछि शिक्षकले विद्यार्थीलाई सही बाटो देखाउँछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, उक शिक्षिकाले अश्लीलताको सबै हद पार गरेकी छिन् । यी शिक्षिका भारतको गुजरातकी हुन् । पोरबंदरको एक स्कुलमा पढाउने यी शिक्षिकाले विद्यार्थीको अगाडि आफ्नो कपडा खोलेर डान्स गर्थिन् ।
यतिमात्र होइन ती शिक्षिकाले छात्राहरुलाई अश्लील भिडियो देखाउँथिन् र आपत्तिजनक कुरा गर्थिन् । यो कुराको खुलासा भएपछि अभिभावकले ठूलो हंगामा गरेका छन् । घटना पोरबंदर शारदा विद्या मन्दिर स्कुलको हो । यहाँका छात्रका अभिभावकका अनुसार ती शिक्षिकाले सानो उमेरका छात्रहरुलाई एउटा कोठामा बन्द गर्थिन् र आफ्नो कपडा खोलेर डान्स गर्थिन् । उनले ती छात्रहरुसँग अश्लील क्रियाकलाप गर्थिन् । पछि ती विद्यार्थीलाई कसैलाई केही नभन्ने धम्की दिन्थिन् ।
शिक्षिकाको यस्तो हर्कतले सबै विद्यार्थीहरु डराएका थिए । घटनाको खुलासा तब भयो जब एक छात्रले हैरान भएर शिक्षिकाको क्रियाकलापबारे आफ्ना अभिभावकलाई बताए । छात्रबाट घटनाबारे जानकारी पाएपछि अभिभावक स्कुल गए । उनीहरुले यसबारेमा शिक्षा विभागलाई पनि सूचित गरे । विभागका अधिकारी पनि स्कुल पुगे ।
जब अधिकारीले विद्यार्थीसँग शिक्षिकाको बारेमा सोधे त्यसपछि विद्यार्थीले सबै कुरा बताइदिए । विद्यार्थीको कुरा सुन्दा अभिभावक र अधिकारी चकित परे । तत्कालै प्रहरीलाई बोलाइयो । प्रहरीले आरोपी महिलालाई गिरफ्तार गरेको छ । पुलिसले ती महिलाको मोवाइल जफत गरेको छ । मोवाइलको जाँच भइरहेको छ । मोवाइलमा थुप्रै अश्लील भिडियो भेटिएका छन् ।
Previous post: सावधान ! तपाईमा पनि कतै ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने बानी त छैन ?
Next post: एक युवतीका २० ब्वायफ्रेण्ड, सबैसँग आइफोन फुत्काएर किनन् नयाँ घर
आफैले जन्माएको शिशु हत्या गर्ने आमा पक्राउ
श्रीमानले हानेको गोली लागेर श्रीमती ठहरै, गोली हान्ने श्रीमान प्रहरी नियन्त्रणमा
दाईसँगको विवादमा भतिजाको हत्या गर्ने काका पक्राउ
दुई जनाको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीद्वारा ३१ जना पक्राउ
ट्रायल परीक्षामा पास गराईदिन्छु भन्दै रकम माग्ने पक्राउ